Higurashi Rehefa Mitomany ry zareo Anime ahemotra (Coronavirus) - Hafa
Anime bebe kokoa no voakasiky ny coronavirus, ary toa isaky ny herinandro tokana.
Higurashi Rehefa Mitomany, nahemotra ilay kinova vaovao nalamina tamin'ny Jolay 2020.
Ny Covid 19 dia nanery ny mpiasa hanemotra ny anime amin'ity fahavaratra ity.
Ny habetsaky ny anime nofoanana na ahemotra dia mety hitohy mandritra ny 2 volana farafahakeliny. Miankina amin'ny faharetan'ny fanidiana izany rehetra izany, ary na ny onjan-korona manaraka dia mampitony ny tokony ho izy.
Ity no nolazain'ny ekipa Higruashi:
'Na dia nokasaina halefa tamin'ny Jolay 2020 aza,' Higurashi no Naku Koro ni ', noho ny aretina virus coronavirus vaovao (COVID-19), nomanina tany am-boalohany satria voakasik'izany ny fandaharam-pamokarana, dia hampihemotra ny fanombohan'ny fampielezam-peo isika. .
Ny daty fanombohana fampielezam-peo vaovao dia hambara amin'ny tranonkala ofisialy sy Twitter raha vantany vao tapaka. Miala tsiny indrindra izahay noho ny fanelingelenana naterak'izany. Misaotra anao noho ny fahazoanao. ”
Andao hojerentsika ny fomba filalaovan-javatra mandroso.
Loharanom-baovao: Tranonkala ofisialy
Fampisehoana an-tsarimihetsika sy horonantsary 17+ mihemotra amin'ny taona 2020 Misaotra ny #Coronavirus
Hetsika Anime 19+ TSY MAINTSY NOHONJENA Noho ny Coronavirus (2020)